Kenya oo nambarka 4-ad ka gashay liiska wadamada dunida ee la rabo in ay si weyn ula tacalaan Cudurka AIDS-ka – The Voice of Northeastern Kenya
Kenya oo nambarka 4-ad ka gashay liiska wadamada dunida ee la rabo in ay si weyn ula tacalaan Cudurka AIDS-ka
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa maanta lagu wadaa in uu shacabka ku hoggamiyo xuska maalinta dunida ee cudurka AIDS-ka.
Sanad kasta taarikhdu marka ay ku beegantahay 1-da bisha Disembar ayaa caalamka laga xusaa maalinta cudurka AIDS-ka ee dunida halka sanadkan hal ku dhig looga dhigay hoggaan, islaxisaabtan iyo saameyn.
Munasabada ugu weyn ee xuska maalintan ayaa ka dhici doonto garoonka cayaaraha ee Nyayo ee magaaladatani Nairobi.
Xuska maalintan ee sanada 2016-ka ayaa ku soo begmaya iyada oo warbixin la soo saaray lagu sheegay in Kenya ay nambarka 4-ad ka gashay liiska wadamada kala duwan ee dunida ee la rabo in ay si weyn ula tacalaan cudurka AIDS-ka in laisku gudbiyo.
Ra’yi aruurin la sameeyay sanadkan 2016-ka ayaa lagu sheegay in kiiska cudurkan ee la isku gudbiyo ay hoos u dhecen oo ay gareen 77, 000 oo kiis marka loo barbardhigo sanadii 2014-kii oo ay ahayeen 100,000 oo kiis.
Dad kenyaan ah oo tiradoodu lagu qiyasay 1.6 milyan oo qof ayaa qabo cudurkan halka caqabad ugu weyn ay tahay takoorka ka dhan ah dadka uu cudurkan saameyay.
Golaha qaran dalka u qaabilsan la tacaalida AIDS-ka ayaa sheegayo in ay billabeen olole la doonayo in sanada 2019-ka lagu yareynayo takoorkan .
Sanadii la soo dhafay ayey ahayd markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu sheegay in dowlada ay miisaniyad sanadeedka 2015- 2016-ka ay lacag dhan 2.bilyan oo shilin u qoondeysay in lagu soo iibiyo daawada ARVS ee cudurkan lagula tacaalo.
← Booliska oo weeraray goob lagu iibin jiray gaas sharci darro ah
Taarikhda la billabayo sixitaanka imtixaanka qaran ee KCSE-da oo shaaca laga qaaday →